ကွယ်လွန်သူအပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှ ကရုဏာတော်အဖြာဖြာ၊ မင်္ဂလာအဖြာဖြာ ကျရောက်ပါစေသား။
အင်နာ လစ်လာဟိ ဝ အင်နာ အိလိုင်းဟိ ရားဂျိအူးန်
မုချဧကံ ကျွနု်ပ်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အဖို့သာ ဖြစ်၍ ဧကန်အမှန် ထိုအရှင်မြတ်၏ ထံတော်သို့သာ ပြန်လည် သွားကြရမည့်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
7 Responses to “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un انا لله وانا اليه راجعون”
July 7, 2021 at 8:42 am | Reply
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၇လမ္းေန (KVSဦးစေလမန္)+(ဟာဂ်ီမKKSေဒၚတီ)တို႔၏ သားျဖစ္သူ၊ Hj Dr. ေမာင္ေမာင္(ႏွင္းေမတၱာအထူးကုေဆးခန္း)ႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚေဘဘီႏွင္း၊ ေဒၚမမႏွင္း၊ ေဒၚနီလာႏွင္း၊ ေဒၚမို႔မို႔ႏွင္း၊ ေဒၚရွီလာႏွင္း၊ ေဒၚသီတာႏွင္း၊ ေဒၚေကသီႏွင္း၊ ေဒၚေမစီႏွင္း၊ ေဒၚစႏၵာႏွင္းတို႔၏ ေမြးေက်းဇူးရွင္ဖခင္ျဖစ္ေသာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ခ်စ္လွေသာ အဖိုးျဖစ္သူ #ဟာဂ်ီေဒါက္တာဦးေမာင္ေမာင္ႏွင္း (ေဆးတကၠသိုလ္-မႏၲေလး) @ Ebrahim bin Sulaiman (Klinik Ebrahim Dan Surgeri-Malaysia) အသက္ 84ႏွစ္သည္ ယေန႔ 7.7.2021ေန႔လည္ 12:45တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ Kuala Lumpurၿမိဳ႕ ေနအိမ္၌ သက္ႀကီးေရာဂါျဖင့္သာ အလႅာအရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံယူသြားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္နီးရပ္ေဝး ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြအေပါင္းအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
အားလုံးပဲ ဒိုအာဒ္ဆုေတာင္းမွာ သတိရေပးၾကပါခင္ဗ်ာ၊
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံးဟာ မိမိအခ်ိန္က်လာသည့္အခါမွာ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေသခ်ာေပါက္ ျပန္သြားၾကရမွာပါ…
May Allah bless his soul and grant him highest Jannah. We will all love him and miss him.
မန္တလေးမြို့ ၂၇လမ်းနေ (KVSဦးစလေမန်)+(ဟာဂျီမKKSဒေါ်တီ)တို့၏ သားဖြစ်သူ၊ Hj Dr. မောင်မောင်(နှင်းမေတ္တာအထူးကုဆေးခန်း)နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ မောင်နှမများဖြစ်သော ဒေါ်ဘေဘီနှင်း၊ ဒေါ်မမနှင်း၊ ဒေါ်နီလာနှင်း၊ ဒေါ်မို့မို့နှင်း၊ ဒေါ်ရှီလာနှင်း၊ ဒေါ်သီတာနှင်း၊ ဒေါ်ကေသီနှင်း၊ ဒေါ်မေစီနှင်း၊ ဒေါ်စန္ဒာနှင်းတို့၏ မွေးကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဖြစ်သော၊ ကျွန်တော်တို့၏ ချစ်လှသော အဖိုးဖြစ်သူ #ဟာဂျီဒေါက်တာဦးမောင်မောင်နှင်း (ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး) @ Ebrahim bin Sulaiman (Klinik Ebrahim Dan Surgeri-Malaysia) အသက် 84နှစ်သည် ယနေ့ 7.7.2021နေ့လည် 12:45တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ Kuala Lumpurမြို့ နေအိမ်၌ သက်ကြီးရောဂါဖြင့်သာ အလ္လာအရှင်မြတ် အမိန့်တော်ကို ခံယူသွားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရပ်နီးရပ်ဝေး ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေအပေါင်းအား အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
အားလုံးပဲ ဒိုအာဒ်ဆုတောင်းမှာ သတိရပေးကြပါခင်ဗျာ၊
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ မိမိအချိန်ကျလာသည့်အခါမှာ ဘုရားသခင်ထံသို့ သေချာပေါက် ပြန်သွားကြရမှာပါ…
July 7, 2021 at 8:47 am | Reply
Sorry for the news of losing your beloved family member.
My family and I hereby sent my heartfelt condolence for your family.
I stayed in his house for three months when I arrived here in KL. You were at the airport to sponsor and guaranteed me when the Malaysian Immigration delayed in approving the entry permit. And next day you sent me by driving early up to the UKM, Bangi interview for my job. You were likeaBapa Angkat for me.
And your son was the real person who facilitate for all the documents, Passport, Visa, air tickets etc at that extremely difficult time in mid 1980’s.
TQ dear doctor, now I will pray for you.
786. Al Fathiha. Obituary.